စာတော်ပြီးသားသူ အမှတ်ကောင်းရတာထက် အောင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နည်းတဲ့သူ အောင်သွားတာက ဆရာတွေအဖို့ ပိုအောင်မြင်တယ်လို့ ပြောရမယ် အမကြီးရေ
အမလဲနော်..အခုတလော.. ခနခနကြုံနေရတယ်..။ဇော်ဇော်လေးသေရတာနဲ့ အခုတခါ တာတေ သေပြန်ပီ..။
ငယ်ငယ်လေးတွေ အသေစောနေကြတာ နှမျောမိပါရဲ့..။
တရားသံနဲ့ ပြောပီးသကာလ .. အားကစားရုံကို သွားတော့မယ်..တာတာ့
ပြောပုံက၊ အညင်ကို ကတ်တယ် . ဟင်း.... မြတ်နိုးကို ကျော၇ာနော် မလေနုကို ဟုတ်ဝူး :D
ရင်ကျပ်ရောဂါတဲ့လား။ ဘာမှ မဖြစ်လောက်တာလေးနဲ့နော်။
ငယ်ငယ်က ဆော်ပလော်တီးခဲ့တဲ့ ဆြာမတွေကို လွမ်းလိုက်တာ ...
တပည့်လေးတွေကိုလည်း ချစ်၊ သားသားလေးကိုလည်းချစ်၊
တာတေ…စနေသား….ရေတက်နေတက်မှာ မွေးတာလား။း-)
အစ်မ ကတော့ ဂရုဏာ ဒေါသကြောင့် မျက်ရည်
ကျတာ, ကျွန်တော် ကြတော့ အားမလို အားမရ ဖြစ်
ပြီး ဆူလိုက် ငေါက်လိုက် ဆိုတော့ ကျွန်တော် စာသင်
မှာ သူတို့ အလွန် ကြောက်..... ဟီးဟီး
ကိုယ်သက်သာ တာပေါ့ နော်။
အမရေ ... ဒါဖတ်ပြီး မျက်ရည်ဝဲမိတယ် ။
ရှားရှားပါးပါး ဆရာမတွေထဲမှာ မတန်ခူးပါနေတာသိရတော့....လေးစားတယ်
နောက်ပြီး ကိုယ့် စိတ်ထဲ က ကိုယ့်ဘာသာ တိတ်တိတ်
လေး သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိတ်ဆွေက...
အမရေ အရာရာအတိုင်းအတွက် တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
မတန်ခူးရေ.. ဆရာမက ငိုတယ်ဆိုလို့ သမီးလည်း ငိုချင်လာပြီ.. အမ က ဆရာမလည်း လုပ်ဖူးတယ်နော်.. တာတေအပေါ် ထားတဲ့ သံယောဇဉ်လေးကို ဖတ်ပြီး ကြည်နူးမိတယ် မရေ.. ဖတ်ပြီးတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်... နဂိုအခံကလည်း မျက်ရည်လွယ်တယ်... တခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင် မျက်ရည်က အရင်ဆုံးကျလာပြီ။ မကောင်းဘူးဆိုတာ သိပေမယ့် ပြင်မရဘူး.. အဟီး.. အခုဒီပို့စ်ကို မဖတ်ခင်ကလေးပဲ ငိုပြီးသွားတာ.. :P
ခုဘဲ ချိုသင်းဆီက ပြန်လာတာ..
တာတေ အကြောင်း ဖတ်ရပြန်တော့...
ဟင်း... ငိုချင်တာဘဲ သိတော့တယ်..။
ဒီပို့ စ်လေးဖတ်ပြီး ကျနော်ပါငိုချင်သွားတယ်။ တကယ်ပဲ လောကကြီးက မြေန်ိပ်ရာ လှံစိုက်တက်ပါလားနော်............................။
ဒီပို့စ်က တကယ်တော့ မတန်ခူးရဲ့ အမှတ်ရရ အဖြစ်တွေထဲက တခုကို စာပြန်ဖွဲ့ထားတာပေမယ့် နောက်ဆုံးအပိုဒ်မှာ ရေးထားတဲ့ အမယ်ကြီးပြောသွားတဲ့စကား “ခုတော့… ဆရာမ ငိုလို့လိုက်ငိုမယ့်သူမရှိတော့ဘူးပေါ့အေ” ဆိုတဲ့ စကားက တော်တော် ရင်နင့်စရာကောင်းတယ်။ တကယ်တော့ ရင်ကျပ်တာဟာ သေလောက်တဲ့ ရောဂါထဲမှာ မပါပါဘူး ဆိုပြီး အတွေးတွေ ဖြန့်မိနေသေးတယ်။
မြတ်နိုးရေ… ပျော်စရာလေးတွေ ရေးပါ့မယ်… စိတ်ထဲရောက်လာတာ ချရေးလိုက်တာပါ… ကိုယ့်ညီမတော့ ပိုလှနေမှာ မြင်ယောင်သေး…
Mmgamedevရေ… လာလည်တာ ကျေးဇူးပါနော်…
သီးကင်း တဖြုတ်ဖြုတ်ပါပဲ ချိုသင်းရေ…
ဆော်ပလော်တီးတာ တကယ်တော့ ချစ်လို့ ပေါ့ကေလာရယ်…
မဇနိရေ… ချစ်တဲ့သူတွေက တော့ ချစ်စရာလေးလို့ ပြောကြတယ်…
တာတေက နာမည်အရင်း မဟုတ်ပါဘူးကိုပေါရေ… ဒီနာမည်များ စီးသွားသလားပဲ…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်စေချင်လို့တတ်စေချင်လို့ လေ… ကြာတော့ သူတို့ နားလည်သွားမှာပါ skyblueရေ…
ရေးတုန်းကလဲ မျက်ရည်ဝဲခဲ့တယ် ဂျစ်ရယ်…
ကိုသစ်နက်ဆူးရေ… ကျွန်မက ဆရာမ အစစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး… စာသင်ဖူးတာပေ့ါနော်… ကျွန်မကို မိတ်ဆွေအဖြစ်သတ်မှတ်တယ် ဆိုတာ သိရတော့ ၀မ်းသာပါတယ်… ကျွန်မက မိတ်ဆွေတော်နှင့်ပြီးသားနော်…
အဲဒါဆို ဆရာမဒေါ်ခင်ခင်အေးအကြောင်း ပို့ စ်တခုရေးပါလား ကိုပေါက်ရေ…
အို… ကိုယ့်ညီမလေး ဘာလို့ ငို… ဘယ်သူလုပ်လဲပြော… တို့ လဲ ဒီလိုပဲ… မျက်ရည်လေးစမ်းစမ်းနဲ့ … တူတယ်နုရေ…
သက်ဝေရေ… ပျော်စရာတွေ ပြန်ရေးပေးမယ်နော်… ငိုနဲ့ တော့ တိတ်…
မောင်မျိုးရေ… ငိုပါနဲ့ မောင်လေးရယ်…ဒါ ဘ၀ပေါ့….
ဟုတ်တယ်ကိုစေးထူး… ကျွန်မလဲ အဲဒီအတွေးကို အဲဒီထဲက ဖြန့် မိနေတာ… တချို့ တွေ အသက်သာဆုံးသွားတယ် ဘာကြောင့်သေလဲ ဆိုတာ သေချာသိခွင့် မရကြဘူး… အဲဒီထဲမှာ ချို့ တဲ့တဲ့ တာတေ ပါသွားတယ် ထင်တယ် ကိုစေးထူးရေ…
သတိရမိတိုင်း ထိုအတိတ်ကို အမြဲပြန်ရောက်သွားစေသည်။
Nat Shine said...
တာတေကို ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ တစ်ခုခုတော့ကျန်ခဲ့သလိုပါပဲ